tenga Etravirine poda (269055-15-4) hplc≥98% | AASraw R&D Reagents
/ Products / MaR & D Reagents / Etravirine upfu
Rating: SKU: 269055-15-4. Category: MaR & D Reagents
MUTSVENE unobatsira nekugadzira zvigadzirwa kubva ku gramu kusvika kuhutano hweEtravirine powder (269055-15-4), pasi peCGMP mutemo uye nehutsika hwehutano hwehutano.
Etravirine mushonga unodzivirira hutachiona hunodzivirira hutachiona hwehutachiona hweHIV (HIV) kubva pakuwanda mumuviri wako. Etravirine inoshandiswa nemimwe mishonga yekurapa HIV muvanhu vakuru nevana vane makore angangoita matanhatu. HIV inokonzeresa iyo inowanikwa immunodeficiency syndrome (AIDS). Etravirine haisi mushonga weHIV kana AIDS.
Etravirine powder basic Characters
Name: Etravirine powder
Molecular Kurema: 435.284
Raw Etravirine powder mukushandiswa
Mazita emagetsi: Intelence
Zita rechizvarwa: Etravirine powder (Kutumidzwa: E tra VIR een)
Etravirine powder Usage
Etravirine poda ndiyo mishonga yemishonga inoshandiswa pamwe chete nemimwe mishonga yekurapa munhu immunodeficiency virus (HIV) kune vanhu vane makore anopfuura 6. Etravirine powder inoshandiswa apo mamwe mishonga haina kubudirira. Etravirine powder rudzi rwemishonga yeHIV inonzi non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI). Inoshanda nekudzivirira hutachiona hwekuparadzanisa nekupararira.
Iyi mishonga inowanikwa mupepeti uye inowanzotorwa kaviri zuva rimwe nerimwe, mushure mekudya. Etravirine poda inofanira kumedzwa yose negirazi remvura.
Migumisiro yakajairika inosanganisira kumira, kupera, kana kurwadziwa mumaoko kana patsoka, nekurambana.
Ndechipi chiyero cheEtravirine powder
Kuita vakuru vakuru vose vane HIV
200 mg muromo kaviri pamusi mushure mekudya
Kushandisa Vana Vezvechirwere Chetachiona cheHIV
6 kusvika pasi pemakore 18:
16 kg kusvika pasi pe 20 kg: 100 mg muromo kaviri pamusi mushure mekudya
20 kg kusvika pasi pe 25 kg: 125 mg muromo kaviri pamusi mushure mekudya
25 kg kusvika pasi pe 30 kg: 150 mg muromo kaviri pamusi mushure mekudya
30 kg kana kupfuura: 200 mg muromo kaviri pamusi mushure mekudya
Kuchengetedza kwemaHepatic impairment (Child-Pugh Class A kana B): Hapana kugadziriswa kwakakurudzirwa.
Kuwedzera hepatic impairment (Child-Pugh Chikamu C): Data haisipo
Iyo yakakura sei Etravirine powder inoshanda
Etravirine powder inoshandiswa pamwe nemimwe mishonga inoporesa utachiona hunokonzerwa nehutachiona hwehutachiona hweHIV (HIV). HIV ndiyo hutachiona hunokonzera kuwana immune kukwana syndrome (AIDS). Mushonga uyu unowanzopiwa kuvarwere vakagamuchira kurapwa kweHIV munguva yakapfuura.
Etravirine powder haigoni kurapa kana kudzivirira utachiona hweHIV kana AIDS; zvisinei, zvinobatsira kuchengetedza hutachiwana hweHIV kubva pakubereka uye hunoita sekunonoka kuparadzwa kwemuviri wemuviri. Izvi zvingabatsira kunonoka zvimwe zvezvinetso zvine chokuita neAIDS kana HIV. Etravirine powder haingakuchengetedzi kupararira HIV kune vamwe vanhu. Vanhu vanotora mishonga iyi vanogona kuramba vachiine zvimwe zvinetso zvine chokuita neAIDS kana HIV.
Zvakanyanya, zvinogona kutyisidzira upenyu, uye kuparara kweganda kwakaitika. Kupindira kwehupenziensitivity (yakaratidzwa nekukurumidza, kushandiswa kwebumbiro remitemo, uye dzimwe nguva hurumende inoshandiswa, kusanganisira kusagadzikana kwechiropa) zvakare yakataurwa. Rash inowanzoitika mukati mavhiki e6 ekurapa kutanga. Kana zviratidzo kana zviratidzo zvekuita kweganda kana kugadziriswa kweganda zvinokura, Etravirine therapy inopira inofanira kuregedzerwa kamwechete, chimiro chechipatara (kusanganisira chiropa che transaminases) chinofanira kuongororwa, uye kurapa kwakakodzera kunofanira kutanga. Kurambidza pakuramba Etravirine powder mushure mekutanga kwekukurumidza kukuru kunogona kukonzera kutyisidzira kwehupenyu.
Etravirine poda inogona kusangana nemishonga yakawanda zvichikonzera kuchinjika kweplasma mazamu emimwe mishonga kana yeEtravirine powder. Varwere vanofanirwa kurairwa kuti vataure mishonga yese yavari kutora, kusanganisira mishonga isinganyorerwe mishonga uye zvinovaka muviri / mishonga yemakwenzi; kunyanya St. wort.
Immune reconstitution syndrome yakaitika munguva yekubatanidza antiretroviral therapy. Varwere vanopindura kurapwa vanogona kukurudzira kupesana kwezvipembenene kana zvisizvo zvisingatauri zvirwere uye zvinoda kuongorora uye kurapwa.
Iko mukana weiyo HIV kuyambuka-kuramba pakati pe nonnucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTI) iripo asi haina kuongororwa zvizere. Muchinjiko-kuramba kune dzimwe NNRTIs zvinotarisirwa zvichitevera virologic kutadza neEtravirine poda-ine regimen yeiyo virologic kutadza kuzviparadzanisa. Kusarudzwa kwemaantiretroviral vamiririri ehurongwa hwemishonga yemurwere kunofanira kuitwa zvakanyatsonaka.
Kushandisa pamwe chete nemamwe maitiro anoshanda ma antiretroviral anowedzera mikana yekuita mhinduro yekurapa. Varwere vakaona kusakundikana kwe virologic pane regimen yeNNRTI inofanira kunge isingashandisi Etravirine poda pamwe chete nucleoside / nucleotide reverse transcriptase inhibitors.
Kudzivirirwa uye kubudirira hazvina kugadziriswa mukurapa-vasina zvirwere.
Kunyatsotarisirwa kunofanira kupiwa kuenzanisira kuenzanisa, kurapa kwemishonga yekurapa, kuparadzira ruzivo, nekuraira mirayiridzo kuti kuderedze njodzi yekupererwa, kukanganisa, uye kusarudzwa.
Inokura Etravirine powder Iva Nezvimwe Zvikamu Zvakaoma
Muzviitiko zvisingawanzoitiki, Etravirine powder inogona kukonzera chirwere chinokonzera kuparara kwemakumbo emasumbu, uye zvinokonzera kushaya mafungiro. Dana chiremba wako pakarepo kana uine marwadzo asina kutsanangurwa mumasumbu, unyoro, kana utera zvakanyanya kunyanya kana iwewo une fevhiri, kuneta kusingawanzoti, uye urini wakaita ruvara.
Rega kutora Etravirine powder uye kudana chiremba wako panguva imwechete kana iwe une dambudziko rakakomba rakadai se:
fever, chills, musimba urombo, hutano hwakakanikana kana hutumbu, maronda emuromo, kunzwa kuneta zvakanyanya, kana zvimwe zviratidzo zvehutachiwana hutsva;
kurwadziwa kwepfupa, kunzwa kushoma kwekupema;
kurinha zvishoma kudarika nguva kana kwete kana zvachose, kuzvimba, kukurumidza kuwedzera kuwanda;
kukurumidza kutsamwa kwomwoyo, kuwedzera kutuka, kudengenyeka, matambudziko ekurara (kusuruvara), kunzwa kunetseka kana kutsamwa;
chirwere chakasimba, kusina kutsanangurwa kurasikirwa, kuchinja kwemwedzi, kusava nesimba, kurasikirwa kwechido mune zvepabonde;
kurira mumutsipa wako kana kumutsipa (utachiona hwakawedzerwa);
kushaya simba kana kunyanya kunzwa muminwe kana zvigunwe;
matambudziko nekuenzanisa kana kufamba kweziso, kunetsa kutaura kana kumedza;
kurwadziwa kwakanyanya kunorwadza shure, kurasikirwa kwekanyara kana kutora maitiro;
kushungurudza, kurwadziwa kwepamusoro kwepamusoro, kurasikirwa kwechido, muto mutsvuku, denga-mavara zvigaro, jaundice (ruvara rweganda kana maziso);
icho chiratidzo chekutanga chemarudzi ose echando cheganda, zvisinei kuti ane unyoro; kana
kuita kwakakomba kweganda - fivha, huro, kuzvimba kumeso kwako kana rurimi, kupisa mumaziso ako, kurwadziwa kweganda, kuchiteverwa nekutsvuka kweganda kana kwepepuru ganda rinopararira (kunyanya kumeso kana kumusoro muviri) uye kunokonzeresa kutsemuka uye kupenya.
kupera kana kunzwa kumeso mumaoko ako kana patsoka;
chiratidzo chisina kunaka;
kugumburwa mudumbu, kuvimbiswa, kuora mwoyo, muromo wakaoma;
kurota kwakasiyana; kana
shanduko muchimiro kana nzvimbo yemafuta emuviri (kunyanya mumaoko ako, makumbo, kumeso, mutsipa, mazamu, uye chiuno). ”
Nzira yekutenga Etravirine poda kubva kuAASraw